Pixel 4: ပြန်ဆိုအသစ်များသည်၎င်း၏တရားဝင်ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုသည် Androidsis
ဤပြန်ဆိုချက်များသည် Google Pixel4၏ဒီဇိုင်းကို၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါစွာဖြင့်အတည်ပြုသည်
Nerea Pereira | | Android ထုတ်ကုန်များ
ငါတို့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး နောက်မျိုးဆက် Google Pixel။ ဒါဟာအမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူဟာဖုန်းနှစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ ယခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုနိုင်သည် Google က Pixel 4။ ထို့အပြင်နောက်မျိုးဆက်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအတည်ပြုသောပြန်ဆိုထားသောစီးရီးများပေါက်ကြားလာခြင်းဖြစ်သည် Google ကပြုလုပ်သည်
သတိပြုရန်မှာယိုစိမ့်မှု၏အရင်းအမြစ်မှာ @Onleaks ထက်ပိုလွန်။ ဘာမျှမဟုတ်ကြောင်း၊ သူ၏ပို့စ်များသည်တကယ့်ကိုမြင့်မားသောနှုန်းထားရှိသည်။ ဒါက Google Pixel4ရဲ့နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းမဟုတ်တာကြောင့်အရာရာကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားရမယ်။
1 ဂူးဂဲလ် Pixel4၏ဒီဇိုင်းတွင်အံ့အားသင့်စရာများ - အနိမ့်အမြင့်များမရှိ
2 Google Pixel4၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကော။
ဂူးဂဲလ် Pixel4၏ဒီဇိုင်းတွင်အံ့အားသင့်စရာများ - အနိမ့်အမြင့်များမရှိ
အခုငါတို့အနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ Google Pixel4ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်ကြသည်။ ပြီးတော့အဓိကတစ်ခုကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာထစ်မချခြင်းပဲ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရိုးရာဒီဇိုင်းကိုဆက်လက်ကစားနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဤကိစ္စတွင်အနည်းငယ်မျှသောအပေါ်နှင့်အောက်ဘောင်များရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရှေ့ဖက်တွင်ဒုတိယအသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ အထက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာဘေးရှိတံတားငယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အလယ်ဗဟိုမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့စပီကာကိုငါတို့တွေ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တက်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဤအာရုံခံကိရိယာတွင်မျက်နှာ၏မှတ်ပုံတင်စနစ်အပြည့်အစုံရှိရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေသည်။
ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြှင့်လိုက်ရင်ပေါ့ စီမံကိန်း Soli Google Pixel4မှာလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ။ အရာရာပြောင်းလဲသွားပြီလား။ Project Soli ဆိုတာဘာလဲ? Mountain View အခြေပြုထုတ်လုပ်သူမှလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာနှင့်အမူအယာများအားဖြင့်မည်သည့်သဟဇာတဖြစ်သောကိရိယာကိုမဆိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်နည်းပညာအသစ်။
နှင့်မျှမတို့, ငါတို့သီချင်းများဖြတ်သန်းနှင့်အခြားနည်းနည်းအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်နည်းပညာစျေးကွက်အတွက်အလွန်အလားအလာအနာဂတ်ကတိပေးထားတဲ့အထင်ကြီးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ခုန်အကြောင်း။ ဂူးဂဲလ်မှလုပ်ဆောင်နေသောဤစီမံကိန်းအသစ်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် Pixel4ကိုထုတ်လွှင့်နိုင်မည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပိုကောင်းအောင်သင်ပြပေးပါမည်။
နောက်ကျောမှာတွေ့ရတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့နောက်တစ်ခု။ ဟုတ်တယ်၊ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ Google က Pixel4Pixel 3a ကကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးပေမယ့်ဒါဟာ minijack မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နောက်ကျော၌တွေ့မြင်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့အသစ်အဆန်း။ ဟုတ်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်သူရဲ့နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့သင်္ဘောပေါ်ကကင်မရာကသုံးဆကင်မရာစနစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူသည်သူ၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက်ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောသုံးဆကင်မရာသို့ခုန်ချလိုက်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမည်မှာ - အကယ်၍ ဖုန်းသည်လက်ရှိတွင်ထိပ်တန်းဓာတ်ပုံအပိုင်းကိုကမ်းလှမ်းပါကဤကိရိယာသည်သုံးဆကင်မရာစနစ်ဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်မည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်မျှတစွာချုပ်ထားသောဒီဇိုင်းရှိသည်ဟုပြောပါ 147,0 68,9 8,2 မီလီမီတာအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာမော်ဂျူး၏ထွက်ပေါက်ကိုရေတွက်လျှင် ၉.၃ မီလီမီတာသို့သွားသည်။ ထိုအခါလက်ဗွေစာဖတ်သူကို? ကောင်းပြီ၊ Google Pixel 9.3 ၏ဖန်သားပြင်သည်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သောအာရုံခံကိရိယာဖြစ်လာမည့်ယခင်မျိုးဆက်နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသင့်သည်။ ပေမယ့်, ဘယ်တော့မှထက်နှောင်းပိုင်းတွင်ပိုကောင်း။
Google Pixel4၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကော။
ဖြတ်သန်းသွားသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ Google Pixel4ဟာ့ဒ်ဝဲ, က high-end ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် Snapdragon 3.040+ ပရိုဆက်ဆာအပြင် 1.440 GB RAM နှင့်အတူ QHD + မျက်နှာပြင် 855 x6pixels ရှိသည့် XL ဗားရှင်းကိုမျှော်လင့်ရသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် internal memory ၏ 256 နှင့် 512 GB ဗားရှင်းများပါရှိမည်ကိုသတိပြုပါ။
သမားရိုးကျ Google Pixel4လည်းရှိလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင် Full HD + မျက်နှာပြင်ပါရှိသော်လည်းတူညီသည့်ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM နှင့် internal storage configuration တို့ပါရှိသည်။ ယခင်မော်ဒယ်များ၏အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သောဘက်ထရီဒေတာကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သို့သော် Pixel4၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်ယခင်မော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Google Pixel4နှင့် Pixel4XL တို့စတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ မော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးစလုံးကိုအောက်တိုဘာလလယ်တွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီးတရားဝင်ရက်စွဲမရှိသေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » ဤပြန်ဆိုချက်များသည် Google Pixel4၏ဒီဇိုင်းကို၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါစွာဖြင့်အတည်ပြုသည်
ယခုသင် Sky: Niños de la Luz ဟုခေါ်သောဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်